ekhaya > Travel Europe > 5 Indawo entle yePicnic eYurophu
1. Ipiknikiki kwiPetrin Hill, Prague
Izimvo kunye nomoya ophakathi kweParkin Hill park zenza enye yezi 5 eyona ndawo inepikiniki eYurophu. Ngelishwa, ibekwe kwiDolophu encinci, I-Petrin Hill yipaki eluhlaza kunye nenomtsalane ejonge iPrague castle. UPetrin unikezela ezona mbono zintle zkulu, kwaye unganyukela kwinqaba ejongayo Iimbonakalo ezintle ngokwenene emzini, iinqaba, iibhulorho.
I-Petrin Hill ifanelekile ipikniki eYurophu ngentwasahlobo, ukuwa okanye ihlobo. Amagqabantshintshi aya kujonga ngokuqinisekileyo bothuswa kukuwa kwaye entwasahlobo nasehlotyeni yonke imithi nomhlaba ziya kutyatyamba kwaye zibemibala eluhlaza. Zibambe nje ezinye i-scones nge-berries ezivela Amanqaku Bakubhile kwaye nonke nimiselwe ipikiniki emangalisayo ePrague.
Amanzi pristine amanzi aluhlaza kunye neentaba ezibonisa echibini, izimvo zeLake di Braies eseSouth Tyrol e-Itali ziya kufaka imibala kwipikiniki yakho neenkumbulo ezintle. I-Italiya yindawo yasezulwini, zidityaniswe kunye amachibi amangalisayo neentaba, ayinyanzelekanga ukuba ichaze izizathu ezininzi zeli chibi liphezu kwethu 5 eyona ndawo inepikiniki eYurophu.
4. Ipiknikhi kwisiqithi saseMargret, Budapest
IParis ineegadi ezintle ezintle kunye neepikniki ecaleni kweSeine. Eyona ndawo inemifanekiso emihle eParis kulungile kwindawo ebonakalayo yeChamps de Mars.
Yindawo entle eluhlaza phakathi kokuhlanganiswa kwesixhenxe ne-Eiffel tower. Ifanelekile ipikniki eParis kwaye inikezela ngezihlalo eziphambili zelanga. Ukongeza kwimeko yomhlaba, ikwayenye ye 10 umbono ogqwesileyo kwi-Eiffel tower eParis.
Rhoqo ehlotyeni iintsapho zaseParis zafika ukuze zithambise ilanga okanye zonwabise ukuwa kwegadi. Luhle kakhulu kwaye lubonelela ngendawo entle yokujonga izibane zase-Eiffel tower ebusuku.
Ngaba uyafuna ukusibetisa iposti yebhlog yethu "I-5 yePicnic Spot eNgcono kakhulu eYurophu" kwisiza sakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url =I-https://www.saveatrain.com/blog/best-picnic-spots-europe/ ‎– (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
picnic picniceurope PicnicinParis picnicspotseurope picnictable summertravel UkutyaPrague indawo yokuhamba